किन होला एक केटा चाहनुहुन्छ भने, पूरा गर्न एक केटी को आमाबाबुले छ । डेटिङ फ्रान्स साइट
त्यहाँ छैन धेरै विवरण छन् । यो केटी सक्दैन मिति सम्म मान्छे जान्छ गर्न आमाबाबुले अनुमति सोध्न? उहाँले प्रतिबद्ध छ, लामो अवधि सम्बन्ध वा विवाह अघि पनि डेटिङ केटी छ । यो आवाज जस्तै प्रश्न मा महिला पहिले नै पूर्व-तैयार रूपमा उहाँलाई केही संभावित दीर्घकालीन सम्बन्ध, विवाह, बच्चाहरु आदि. उनको टाउको । जब त्यो टी पनि दिनांक उहाँलाई अझै छ । त्यो आवश्यक बिस्तारै । उनको लिन समय छ । प्रयास गर्न ल्याउन, एक परिपक्व दृष्टिकोण मा जीवन र कसरी गम्भीर सम्बन्ध के.
मिति केटी, अर्थ यो छ कि एक निर्णय को एक दीर्घकालीन सम्बन्ध योजना र विवाह आदि. बीच एक फरक छ शुरू र योजना एक सम्बन्ध सँगै । उहाँले भेट भने आमाबाबुले सही अब यो उहाँलाई यसो भन्दै, हो, विवाह गर्न जा परिवार को भाग भन्दै, उहाँले साँच्चै गम्भीर छ, तर तपाईं स्पष्ट उल्लेख चासो व्यक्त डेटिङ. त्यसैले, तिनीहरू दुवै हेवन टी पनि दिनांक अझै छ । सबैभन्दा सम्भावित कारण म विचार गर्न सक्छन् भन्ने छ मान्छे लिन्छ बैठक मेरो आमाबाबुले रूपमा एक कदम को एक अधिक गम्भीर कुरा जस्तै व्यस्तता वा विवाह । छ भने कसरी उहाँले लाग्यो, बैठक बारे, त्यसपछि उहाँले, सबैभन्दा संभावना छ अझै तयार छैन लागि एक अधिक गम्भीर प्रकारको सम्बन्ध छ । उहाँले चाहनुहुन्छ सक्छ थाह केटी धेरै राम्रो छ पहिले उहाँले निर्णय गर्न थाह छ उनको सारा परिवार, वा रूपमा मान्यता गर्न यो प्रेमी द्वारा उनको परिवार । दोस्रो कारण मेरो मनमा आउछ छ भनेर उहाँले आश्वासन दिइएको छ कि केटी को लागि एक प्रतिबद्धता तर वास्तवमा उहाँले गम्भीर छैन । उहाँले थाह छ, उहाँले हुनेछ पक्रेको लागि आफ्नो निहित द्वारा आमाबाबुले. उहाँले पनि डर छ कि प्रश्नको जवाफ सत्र प्रकट गर्न सक्छ ती तथ्य जो उहाँले छैन भन्नुभयो केटी । म सुझाव बस भन्न उहाँलाई एक पटक अचानक आफ्नो आमाबाबुले आउँदै छन् उहाँलाई भेट्न दिने उहाँलाई एक आश्चर्य र हेर्न आफ्नो प्रतिक्रिया र त्यसपछि तपाईं याद सक्छ धेरै कुराहरू.
एए तापनि मा स्थिति दिन योग्य व्याख्या दिइएको भनेर प्रश्न प्रतिबिम्बित देखिन्छ सांस्कृतिक मतभेद छु भनेर परिचित छैन । केही अवधि को डेटिङ
बैठक आमाबाबुले साधन प्राप्त व्यापक स्वीकृति र संभवतः अनुमोदन को सम्बन्ध छ कि छैन वा छैन यो हो जा गर्न नेतृत्व गर्न केहि गम्भीर छ । यति भने, एक केटा चाहनुहुन्छ छैन पूरा गर्न केटी आमाबाबुले द्वारा डराउनुहुन्छ.
यो पनि सक्छ मतलब छ कि उहाँले विश्वास छ कि यो पनि चाँडै छ र उहाँले, हेर्न चाहन्छ कि वा छैन तपाईं एक सम्बन्ध सामाग्री
तर यो सिर्फ मेरो अनुमान तपाईं बस उहाँलाई सोध्न किन उहाँले छैन पनि मा बैठक आफ्नो मान्छे, यो तपाईं समय बचत हुनेछ र टाउको दुखाइ आंकडा प्रयास यो मान्छे बाहिर । यो वास्तवमा एक धेरै साधारण समस्या बीचमा अंग्रेजी शिक्षार्थियों, र को लागि धेरै कारण छन् । सबैभन्दा अंग्रेजी शिक्षार्थियों पाउन भन्ने कारण तिनीहरूले समस्या भइरहेको बोल्ने छ किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई थाहा छ केटा हो धेरै असजिलो कायम गर्न एक परिवार सम्बन्ध तिनीहरूले सम्म परिपक्व हुनेछ । र तिनीहरूले पूरा यदि बालिका’ आमाबाबुले, तिनीहरूले हुनुपर्छ राख्न अधिक नियन्त्रण गर्न आफ्नो व्यवहार, कुनै प्रेरित कुनै शब्द हुन सक्छ निर्माण नकारात्मक छाप उनको आमाबाबुले अगाडि छ । त्यसैले, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ आरक्षित आफूलाई छ सम्म, उहाँले घोषणा एक ज्वारभाटा माथि संग केटी विवाहको लागि
← अनलाइन डेटिङ साइट
प्लस डेटिङ बिना दर्ता →